Ividiyo: Uyini uMkhiqizo?
NgoLwesibili, ngoJuni 5, i-2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
I-American Marketing Association (AMA) ichaza uphawu njengoba igama, igama, ukwakheka, uphawu, noma esinye isici esikhomba okuhle noma isevisi yomunye njengomuntu ohlukile kunabanye babathengisi.
Kunzima ukuthola imibuzo elula kunayo yonke: Ungubani? Kungani inkampani yakho ikhona? Yini ekwenza wehluke emncintiswaneni? Futhi-ke, leyo ngeminye yemibuzo enzima kakhulu ibhizinisi engayiphendula. Ngesizathu esihle, futhi. Bashaya enhliziyweni yebhizinisi, amanani alo ayisisekelo nenhloso esemqoka. Futhi ukuba khona kwayo emakethe yokuncintisana.
Abantu abaku Godfrey hlanganisa le vidiyo epholile ye-infographic ukuthi uyini umkhiqizo:
Ungalanda ikhophi le-Branding PDF eqediwe lapha.
Tags: brandumkhiqizo uchaziweincazelo yomkhiqizogodfreyividiyo infographicyini uphawu
Ukucatshangelwa Kwamasu Eselula
Ungakugwema Kanjani Ukuzibulala Kwesayithi